Luuliyo – Blast Off to Kindergarten
Waxa aad cunuggaga uga sheekaysaa in ay jiraan dhaqamo kala duwan oo waxa aad u kaxaysaa meelaha uu dhaqamadaasi aqoon dheraad ah laga kororsanayo.
Uga sheekee waxa ay yihiin ciidaha, cuntoyinka, iyo hiddaha ay leeyihiin dhaqamada kala kuwana. Musikada dhegeysta oo sahmiyaa qalabadda kala duwan oo ay dhaqamada kala duwan ay muusikada u isticmaalaan.
Toddaabkiiba hal habeen ha laga dhigo mid lagu barto dhaqan cusub. Cuntada hiddahooda la karsado, cayaarahooda la cayaaro iyo in sharsharaxaad meletalaya la sameeyo, iyo laga sheekeysto waxyaalaha cusub ee la soo bartay.
Mktabadda waaa yaala buugag badan, oo sheeko xariroyin aduunka oo idil ku saabsan. Bugagga ka soo qaado maktabadda oo maalin kasta u wada akhrista.
Ha la barto waxa ay yihiin ciidaha oo caadi ahaan aydan u ciidin. Soo baara cidda u ciidda, halka iyo sida loo ciido, cuntada, maxay tahay cuntada la cuno; iyo la ciida la wada ciida.
Ma taqaanna qoys uu dhaqankooda ka duwanyahay midkiina? Casho ku martiqaada ama cayaar la cayaara iyo ilmahooda ha hadlaan waxa ay yihiiin, qoyskooda, iyo noloshooda. Ilmahada waxa ay baranayaan hiddaha iyo dhaqan cusub, waxa ay baranayaan waxa isaga mid yihiin, ay samaystaan saaxiibo cusub.
Ha la barbarto sida wax loo akhristo ama looga hadlo sawirrada buugga ee lagu baranayo erayo cusub. Weydiid su’aalaha “maxay”. Ilmahaaga jawaabtooda su’aal kale ugu xiji. Ku celi waxa uu ilmahaaga dhayayo iyo ka uga hadal si tifatiran.